घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू मार्सेलो बायल्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मार्सेलो बिएल्साको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कथा, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवारका सदस्यहरू, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थमा तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी अर्जेन्टिनी पेशेवर फुटबल प्रबन्धकको इतिहास चित्रण गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाइँलाई मार्सेलो बिल्साको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
द लाइफ एण्ड राइज एण्ड मार्सेलो बिएसा।
फुटबल प्रशंसकको रूपमा, तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँ फुटबल इतिहासको सबैभन्दा सम्मानित प्रबन्धकहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। यद्यपि धेरैले (तपाईं सहित) मार्सेलो बिल्साको जीवनी न्याय गरेन जुन धेरै चाखलाग्दो छ। अब, थप कुनै विज्ञापन बिना, हामी सुरुको जीवनको साथ अगाडि बढौं।
मार्सेलो बिल्साको बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, फुटबल प्रबन्धकलाई "EL लोको" उपनाम दिइएको छ। मार्सेलो अल्बर्टो बिएल्सा काल्डेरा जुलाई १ 21 1955 को २१ औं दिनमा उनको आमा, लिडिया काल्डेरा र बुबा, राफेल पेद्रो बिअल्सा अर्जेन्टिनाको रोजारियो शहरमा जन्मनुभएको थियो। उहाँ आफ्ना बुबाआमाको बिचको सफल मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ।
मार्सेलो बिएसाको बढ्दो बर्ष:
जवान “एल लोको” जसलाई अक्सर चिनिन्छ, आफ्ना भाइबहिनीको साथ रोजारियो शहरमा हुर्केका थिए- एक जेठा दाजु राफेल र मारिया युजेनिया नामकी बहिनी। शहरमा आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरू बित्दै, जवान बिल्सा एक अध्ययन गर्ने बच्चा थिए जोसँग एक दिनको किताब पढ्ने क्षमता थियो।
उहाँ हुर्कंदै जानुहुँदा मार्सेलो बिअल्साको किताबहरूप्रति चासो बिस्तारै 40० भन्दा बढी खेल पत्रिकाहरूमा परिणत भयो जुन उनले सदस्यता लिए।
मार्सेलो बिल्साको परिवार पृष्ठभूमि:
तत्कालीन यster्गस्टरले आफ्नो हजुरबा हजुरआमाबाट reading०,००० भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखेको जुनसुकै व्यक्तित्व आफैले प्राप्त गरे। उनीहरूको पक्षमा, मार्सेलो बिल्साका अभिभावकहरू ज्ञान र खेलकूदमा रुचिको लागि आफ्नो शुरुको खोजलाई धेरै कारणले समर्थन गर्न खुसी थिए।
कारणहरू मध्येको उल्लेखनीय यो थियो कि मार्सेलो बिल्साका आमा बुबा का उत्कृष्ट क्यारियर थियो। फुटबल म्यानेजर राम्रो गर्न घरबाट आए किनभने उनकी आमा एक शिक्षिका थिए र उनको बुबा एक वकील थिए। यो त्यहाँ समाप्त भएन ... बुबा र आमा दुबै स्थानीय क्लब रोजारियो सेन्ट्रलका डाइ-हार्ड फ्यानहरू थिए।
मार्सेलो बिएल्सा परिवार मूल:
सचेत नभएकाहरूका लागि, कोच अर्जेन्टिनाको बोनफाइड नागरिक हो। मार्सेलो बिअल्साको परिवारको उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानको नतीजाले ऊ अर्जेन्टिनाको सेतो जातीय भएको कुरा प्रकट गर्दछ। अवलोकन गरिए अनुसार यस जातीय समूहले देशको पूर्वी भागमा प्रभुत्व जमाउँछ।
रोजारियोको मूल निवासी सेतो जातीय हो।
कसरी क्यारियर फुटबल मार्सेलो बिल्साका लागि सुरु भयो:
कानून र राजनीतिमा समृद्ध इतिहास भएको परिवारमा जन्मिएपछि, एक युवा "एल लोको" ले परम्परा तोड्ने निर्णय गरे। त्यो लागि, उनले फुटबलमा आफ्नो जीवन समर्पित गरे। तत्कालीन केटाले एउटा सानो उमेरदेखि नै खेल खेल्न शुरू गर्‍यो र १ Ne (१ 15 )०) को उमेरमा जब उनले नेवल ओल्ड केटिको क्लबसँग प्रशिक्षण सुरु गरे तब सक्रिय रूपमा यसमा संलग्न भए।
एक असफल फुटबल क्यारियर:
नेवेल ओल्ड ब्वाइजमा, बिल्साले क्लब स्तरमा उत्र्न धेरै संघर्ष गरे किनभने उनी एक प्राकृतिक खेलाडी थिएनन्। यद्यपि संघर्षरत फुटबलरले क्लबको पहिलो टोलीमा सम्मिलित बनायो, तर ऊ आफैंलाई स्थापित गर्न सकेन। यसैले उनले १ 1978 XNUMX मा क्लब छोडे र लीगबाट ओर्ले।
नेवेल पुराना केटाहरूमा तत्कालीन फुटबलरको एक दुर्लभ दृश्य।
व्यवस्थापनमा मार्सेलो बिएसा प्रारम्भिक वर्षहरू:
धेरै समय नबित्दै युवा फुटबलरले क्यारियर फुटबल छोडे र कोचिंगमा डेलिभ गर्ने निर्णय गरे। उनले १ 1980 in० मा नेवेलको ओल्ड ब्वाईज स्कूल युवा वर्गको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा कोचिंग क्यारियर शुरू गरे। त्यसपछि, उसले अर्को दशकमा धेरै फुटबल क्लबहरू व्यवस्थापन गर्न गयो।
यहाँ उहाँलाई Newell पुराना केटाहरू कोच को रूपमा एक दृश्य छ- Twimg।
क्लबहरूले मेक्सिकन आधारित टोली एटलस एफसी १ 1993 1995 .-१— and 1995 र क्लब अमेरिका १ ———-१— 1996 include समावेश गर्दछ। त्यसपश्चात व्यवस्थापन प्रयासले बिल्सा कोच अर्जेन्टिनीको पक्ष - क्लब एट्लिटिको भलेज सार्सफील्ड १ 1997 1998-1998-१XNUMX र स्पेनिश क्लब - आरसीडी एस्पानियोल १ XNUMX XNUMX in मा देख्यो।
मार्सेलो बाइल्साको प्रोफाइल- प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
व्यवस्थापकको क्यारियरको मोड अहिले २०० 2004 मा आयो जब उनले २०० 2004 ओलम्पिकमा अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीले गोल्ड जितेको देखे। यस जीतसँगै, अर्जेन्टिना पहिलो ल्याटिन अमेरिकी टीम बन्यो जसले १ 1928 २। देखि फुटबलमा ओलम्पिकको उपाधि जित्यो।
२०० See ओलम्पिकमा कसले अर्जेन्टिनालाई स्वर्ण पदकमा पुर्‍यायो- हेर्नुहोस्। मिनेट मिडिया।
बिल्साले चिलीको राष्ट्रिय पक्षको व्यवस्थापन गर्न गएको थियो र टोलीको प्रदर्शनमा सुधार ल्याउन नायक जस्तो स्थिति कमाउन राम्रो गर्‍यो। त्यस्ता सुधारहरूको बीचमा उल्लेखनीय भनेको २०१० विश्व कपको लागि चिलीको योग्यता थियो। जे होस्, तिनीहरू १ 2010 को राउन्डमा पुगेनन्। ब्राजिलबाट पराजित भएकोमा धन्यवाद छैन।
मार्सेलो बिएल्सा कसरी ख्याति कमाई:
२०११ मा जब द्रुत बृद्धि भएको कोचले स्पेनी क्लब एथलेटिक बिलबाओको प्रबन्ध मिलायो, ​​धेरैले उनी प्रतिस्पर्धी क्लब लिगमा राष्ट्रिय टोलीको साथ नक्कल गर्न सक्छन कि भनेर हेर्न उत्सुक थिए। उनीहरू छक्क पर्दै, बिल्साले स्पेनिश क्लबलाई युईएफए यूरोपा लिग र कोपा डेल रेको फाइनलमा देखाए। न त बिल्सा २०० 2011-२००2004 बीचमा मार्सेले, लाजियो र लिलको प्रबन्धनमा विफलता नै थियो।
आफ्नो क्यारियर सफलताको चरम सीमामा, बिल्साले २०१ 2018 मा च्याम्पियनशिप क्लब लीड्स युनाइटेडको व्यवस्थापन लिइन् र उनीहरूलाई २०२० मा प्रिमियर लिगमा फिर्ता पदोन्नति गर्न अग्रसर गराइयो। यो उपलब्धि विशेष गरी शानदार थियो किनकि टोली घाइतेले भरिएको थियो र पदोन्नति लीड्स थियो। १ years बर्षमा पहिलो आरोहण!
जे भए पनि भाग्यले प्रीमियर लिगमा बिल्साको लागि झुकाव गर्दछ, बाँकी जस्तो तिनीहरू इतिहास हुनेछन्।
मार्सेलो बाइल्साकी श्रीमतीको बारेमा:
प्रत्येक सफल प्रबन्धकको पछाडि एक महिला छ र हाम्रो रुचि प्रोफाइल त्यो विभागमा अभाव छ। मार्सेलो बिअल्सा wife० भन्दा बढी बर्षदेखि आफ्नी श्रीमती लौरा ब्राकालेन्टीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको छ। लौरा एक वास्तुकार र रोजारियो राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको एक शैक्षिक हो।
उनी एकेडेमिक समुदायको सम्मानित सदस्य हुन् र उनको नाममा धेरै प्रकाशनहरू छन्। बिल्सा र लौराका दुई छोरीहरू छन्। तिनीहरू Ines र मर्सिडीज सामेल छन्।
Inés खेल मा विशेष गरी हकी मा चासो छ। अर्कोतर्फ, मर्सिडीजको बारेमा धेरै कागजात गरिएको छैन जो उनको व्यक्तिगत जीवनलाई बिल्साको परिवारका अन्य सदस्यहरू जस्तै निजी राख्नमा ठूलो छ।
मार्सेलो बिएल्साको जेठी छोरी, इनेसलाई भेट्नुहोस् लाभेर्डा।
मार्सेलो बाइल्सा पारिवारिक जीवन:
दक्षिण अमेरिकी परिवारहरू गर्वका साथ आफ्नो सफल अफशूटको साथ पहिचान गर्न मन पराउँछन्। यो मामिला मार्सेलो बिल्साका आमा बुबा, आफ्ना भाइबहिनी र आफन्तहरूका लागि फरक छैन। अब हामी उसको बुवालाई परिचय दिन्छौं।
मार्सेलो बिअल्सका बुबाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिला, कोचका बुबा राफेल पेद्रो एक वकिल थिए र राजनीति र फुटबलको प्रेमी थिए। रोजारियो सेन्ट्रलका समर्थक भए पनि उनी बिर्सिएनन् कि बिल्सा प्रतिद्वन्द्वी क्लब नेवेल ओल्ड ब्वाइजका लागि खेलाडी भए र उही क्लबको प्रशिक्षकमा गए।
अफवाह यो छ कि राफेलले कहिल्यै बिल्सालाई टिमको लागि खेल्न र प्रशिक्षक देखेन। दुश्मनीबाट टाढा, दुबै बुबा र छोराको राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध थियो र कहिल्यै एक अर्काको बारेमा खराब बोलेको छैन।
मार्सेलो बिल्साकी आमाको बारेमा:
सफल आमाले पौराणिक कोचहरूलाई जन्म दिएका छन् र लिडिया क्याल्डेरा अपवाद होइन। कोचको प्रभावकारी आमाको कडा मेहनती शिक्षकको रूपमा अर्जेन्टिनेको शैक्षिक क्षेत्रमा समृद्ध इतिहास छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, बिल्साले एक पटक स्वीकार गरे कि उनको अविश्वसनीय कार्य नैतिकता एक गुण हो जुन उनले आफ्नी आमाबाट पाउनुभयो। उसको शब्दमा;
“उनको लागि कुनै प्रयास पर्याप्त थिएन,” उनले पछि स्वीकारे। "मेरी आमाको प्रभाव मेरो जीवनमा आधारभूत हो।"
पारिवारिक बन्धन त्यहाँ समाप्त हुँदैन, मार्सेलो बिल्साले उनलाई अर्जेन्टिना खेल पत्रिका एल ग्रिफिकोको प्रतिहरू किन्नुको श्रेय पनि दिए जसलाई उनले तुरुन्तै खान्छ, एक विकासले उनलाई रणनीतिक चिन्तक बन्न मद्दत गर्‍यो। यो मार्सलो बिल्साका आमा बुबाले उहाँलाई को हुन भनेर धेरै मद्दत गर्नुभएन भन्ने बिना नै जान्छ।
मार्सेलो बिएल्साका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
कोचको पक्कै प्रभावशाली दाजुभाइ, एक जेठा भाई र एक बहिनी छ। मार्सेलो बिअल्सका भाइ राफेल राजनीतिमा छन् र एकपटक अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति नेस्टर किर्चनरको नेतृत्वमा विदेश सम्बन्ध मन्त्रीको रूपमा काम गरे।
अर्कोतर्फ, मार्सेलो बिल्साकी बहिनी राफेलकी बहिनी आर्किटेक्ट र राजनीतिमा पनि छिन् किनकि उनले एक पटक सान्ता फेका लागि उप-गभर्नरको रूपमा काम गरेकी थिइन।
मार्सेलो बाइल्साकी बहिनी, मारिया यूजेनिया-लाई भेट्नुहोस् प्रोफाइल
मार्सेलो बिएल्साका आफन्तहरूका बारे:
प्रबन्धकको विस्तारित पारिवारिक जीवनमा सर्दै, त्यहाँ उनका पुर्खाहरूको कुनै रेकर्डहरू छैनन्। उनका बुवा हजुरबा हजुरआमा, साथै आमा बुवा र हजुरआमा, डाटा कम छ। त्यस्तै, उनका काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भतिजीहरूबारे धेरै उपलब्ध छैन।
मार्सेलो बिएसा फुटबल बाहिर के गर्छ?
म्यानेजरको व्यक्तित्व को विशेषताहरु मा आगे बढौं। के तपाईं सचेत हुनुहुन्छ कि तिनीहरू क्यान्सर राशि चिन्ह अन्तर्गत जन्म भएका व्यक्तिको जस्तै छन्? तिनीहरू निर्दयी प्रतिस्पर्धा र स्थिरता को लागी आफ्नो चाल शामिल छ। थप रूपमा, उनीसँग दृढ व्यक्तित्व छ र सनकी प्रदर्शन गर्दछ।
अरु के छ त? बिल्सा विवरणमा ध्यान दिन्छ, र विरलै आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा विवरण प्रकट गर्दछ। प्रबन्धकको रुचि र शौकहरूको सम्बन्धमा, उहाँसँग धेरै रमाईलो गतिविधिहरू छन् जसमा टहल लिनु, किनमेल गर्नु, फ्यानहरूको साथ फोटो खिच्न, पढ्नु र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
शपिंग उसको मनपर्ने मनोरञ्जन गतिविधिहरू मध्ये एक हो- Thesun।
मार्सेलो बिएल्साको नेट वर्थ र जीवनशैली:
यहाँ, हामी तपाईंलाई कसरी फुटबल फुटबल प्रबन्धक बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ। के तपाईंलाई थाहा छ मार्सेलो बिल्सा लेख्ने समयमा net १ मिलियन भन्दा बढीको कूल सम्पत्ति हो? प्रबन्धकको स्थिर बढ्दो सम्पत्तीसँग उसले ज्याला र तलबमा स्रोतहरू स्थापना गर्दछ जुन उसले एक फुटबल प्रबन्धक हुनको लागि प्राप्त गर्दछ।
यद्यपि, बिल्साले रूढीवादी जीवन शैली जीउँदछ जुन आफ्नो खर्च गर्ने बानीलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो बनाउँदछ। नतिजा स्वरूप, उनीसँग भएका घरहरू बारे थोरै उपलब्ध छ। यस्तै कारहरू जुन उनले पश्चिम यार्कशायरको सडकहरू लीड्सका लागि नयाँ कोचको रूपमा चलाउन प्रयोग गर्दछ।
मार्सेलो बाइल्साका तथ्यहरू:
म्यानेजरको बारेमा हाम्रो लेखन अपूर्ण हुनेछ यदि हामी उहाँ बारे तपाईलाई यी थोरै तथ्यहरू बताउन असफल भयौं भने।
बिल्सा क्याथोलिक हो र त्यहाँ अभ्यास गर्ने एक हो। वास्तवमा, उनले एकपटक अक्टोबर २०११ मा आफ्नी श्रीमतीसँगै स्पेनको गुरनिकाका गरीब क्लेरेस भ्रमण गरेका थिए र उनीहरूलाई उनको तत्कालीन टोली एथलेटिको बिलबाओको लागि प्रार्थना गर्न आग्रह गरेका थिए।
तथ्य # २ - प्रभाव:
के तपाई यस तथ्यबाट परिचित हुनुहुन्छ कि बिल्सा धेरै प्रबन्धकहरूको उदयको लागि प्रभावशाली थियो? तिनीहरू समावेश छन् मौरिसियो पोचेटिन्न- जसलाई उनले सुतेको बेलामा हस्ताक्षर गरेका थिए, पेप Guardiola जो उहाँलाई सबैभन्दा ठूलो कोच र डिएगो सिमीन जसले आफ्नो प्राविधिकताको प्रशंसा गर्दछ।
तथ्य #3- उपनाम पछाडि कारण:
धेरै प्रशंसकसँग ज्ञानको अभाव छैन मार्सेलो बिएल्साको उपनाम एल लोको अनुवाद गर्दछ - पागल म्यान। खेल जित्ने र आवेगपूर्ण विलक्षणको लागि आफ्नो क्रूर भक्तिलाई ध्यानमा राख्दै उसलाई उपनाम दिइन्छ जब पनि योजनाको हिसाबले गर्दैन।
तथ्य - - ट्रिभिया:
यो याद गर्नु अचम्मको कुरा हो कि बिल्साले आफ्नो जन्म मिति १ 1955 1955 साझा गर्दछ धेरै प्राविधिक घटनाहरूको जन्म र प्राविधिक व्यक्तित्वहरूको जन्मसँग। यो १ 1955 inXNUMX मा पहिलो पकेट ट्रान्जिस्टर रेडियो उपलब्ध भयो जब अमेरिकाले सोही वर्ष पहिलो आणविक उत्पादन गरिएको उर्जा प्रयोग गर्न सुरू गर्‍यो। आवश्यक छ कि हामी तपाईंलाई सम्झाउने कि XNUMX को जन्म वर्ष हो बिल गेट्स र स्टीव जॉब्स? हो, हामीले भर्खर गरेका थियौं।
तथ्य # - - मार्सेलो बिल्साको तलब ब्रेकडाउन:
प्रति वर्ष £ 8,000,000 € 8,878,000 $ 10,471,600
प्रति महिना £ 666,666 € 739,833 $ 872,633
प्रति हप्ता £ 153,846 € 170,730 $ 201,376
प्रति दिन £ 21,917 € 24,323 $ 28,689
प्रति घण्टा £ 913 € 1,013 $ 1,195
प्रति मिनेट £ 15 € 17 $ 20
प्रति सेकेन्ड £ 0.25 € 0.3 $ 0.4
यो के हो मार्सेलो बाइल्सा
पुरा नाम मार्सेलो अल्बर्टो बिएल्सा काल्डेरा
उपनाम "EL लोको"
जन्म मिति जुलाई १ 21 1955 को २१ औं दिन
जन्मस्थान अर्जेन्टिनामा रोसारियो
बुबा राफेल पेड्रो Bielsa
आमा Lidia Caldera
भाई बहिनीहरू राफेल (भाई) मारिया युजेनिया (बहिनी)
पत्नी लौरा ब्राकालेन्टी
बच्चाहरु Ines र मर्सिडीज (छोरीहरू)
सोख टहलँदै, किनमेल, फ्यानहरूको साथ फोटो खिच्न, पढ्न र परिवार र साथीहरूको साथ राम्रो समय खर्च
नेट मूल्य $ 1 भन्दा बढी
संसारको महानता प्रबन्धक मध्ये एकको जीवन यात्राको बारेमा यो आकर्षक लेख पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। सारांशमा भन्नुपर्दा, मार्सेलो बिल्साको जीवनीले हामीलाई समझदारी बनायो कि स्थिरता र दृढ संकल्प सफलताको आधार हो।
Lifebogger मा हामी निष्पक्षता र सत्यताका साथ मेमोइरहरू (बिएल्सा जस्ता) वितरणमा गर्व गर्दछौं। कृपया अर्जेन्टिना प्रबन्धकको बारेमा तपाइँको विचारहरूमा एक टिप्पणी दिनुहोस्।
यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि उनी निष्ठा र सम्मानका मानिस हुन्।
एउटा उदाहरण हो जब उनले लीड्स युनाइटेडलाई विपक्षमा गोल गर्न अनुमति दिए जब विपक्षीहरूले गुनासो गरे कि लीड्सले हासिल गरेको गोल 'अनियन्त्रित' हो, र उनले विपक्षीले स्पष्ट प्रयास गरेपछि गोलमालको गोलमाल गरे पनि गोल गरे।
सही कुरा मात्र नगर्ने तर सही काम गर्न देखिएकोमा यो जिम्मेवारीले मार्सेलो बिएल्साको साँचो निष्ठाको उदाहरण दिन्छ, एक सच्चा भद्र पुरुष
3 महीना पहिले BigAl_LBL द्वारा अन्तिम पटक सम्पादन गरिएको